Fitantanana ny harena ankibon'ny tany - ITS Tech Tech
Inona no atao hoe olombelona?
Inona no HRM?
Ny anjara asan'ny HRM
Fampandrosoana ny paikady momba ny toeram-piasana
Fepetra fampindramam-bola sy tombontsoa amin'ny fitantanana
Fianarana sy fampandrosoana
Lalàna mifehy ny asa
Fahamarinana amin'ny tranga ivelany
Hazavao ny ampahan'ny HRM amin'ny fikambanana.
Manazava sy mandinika ampahany amin'ny fampiharana HRM.
Ny fikambanana tsirairay, na goavana na kely, dia mampiasa ny karazana famatsiam-bola hiadiana amin'ny orinasa miasa. Ny Capital dia mampiditra vola, vola, na vokatra ampiasaina hamoronana karama ho an'ny orinasa iray. Ohatra, ny toerana fivarotana dia mampiasa ny firaketana sy ny lisitra, raha toa kosa ny orinasa mpanolotsaina iray dia mety manana programa na rafitra voafetra. Na inona na inona raharaham-barotra, ny fikambanana rehetra dia manao azy ireo ho toy izany: tokony hanana olona izy ireo hanao ny asa aman-dreniny ho azy ireo. Ity dia ny fifantohan-tsaintsika amin'ny alàlan'ny votoatiny: vanim-potoanan'ny fidiram-bola mifandraika amin'ny fananganana fahaiza-manao sy fahaiza-manao.
Fitantanana ny harena voajanahary (HRM) dia ny fomba hampiasana ny tsirairay, ny fanomanana azy ireo, ny fanamafisana azy ireo, ny famoronana ny famaritana azy ireo, ary ny famoronana fomba fitsaboana azy ireo. Amin'ny saha, HRM dia niaina fivoarana maromaro nandritra ny roapolo taona farany teo, ary nanome azy anjara lehibe teo amin'ny fikambanana ankehitriny. Talohan'izay, ny HRM dia mitaky vola amin'ny fitantanam-bola, mandefa solontenan'ny daty ho an'ny solontenany, fitsangatsanganana fitsangatsanganana fandaminana, ary ny fikarakarana ny endriky ny fanamafisam-peo - amin'ny faran'ny andro, ny ampahany betsaka amin'ny fitantanam-pitondrana iray mifanohitra amin'ny ampahany manan-danja manan-danja amin'ny fahombiazan'ny ny fikambanana. Jack Welch, tale jeneralin'ny General Electric sy ny fitantanana ny fitantanana, dia manangana ny ampahany vaovao amin'ny HRM: "Mandosira ny fivoriana sy ny fety nahaterahana sy ny firaketana ankapobeny .... Tadidio fa ny HR dia manakiana amin'ny toe-javatra goavana, ny HR dia miavaka amin'ny toe-javatra sarotra" (Frasch , et al., 2010).
Zava-dehibe ny miantso ny saina ho ato, amin'ny fotoana voalohan'ity votoatin-kevitra ity, ny tale tsirairay dia manana ampahany mamaritra ny fitantanana ny harena voajanahary. Satria tsy manana ny lohatenin'ny talen'ny HR isika dia tsy midika fa tsy hivoaka ny zava-drehetra na raha tsy misy zavatra hafa ampahany amin'ny andraikitra ao amin'ny HRM. Ohatra, ny ankamaroan'ny mpanara-maso dia mitantana ny karama, ny fitaomam-panahy ary ny fikojakojana ny mpiasa - ny fanaovana ireo fomba fijery ireo ao amin'ny HRM ary koa ny fitantanana ny fitantanana. Noho izany, ity boky ity dia tena ilaina tokoa ho an'ny olona izay mila mpitantana ny HR sy olona izay hiatrika raharaham-barotra.
Tsarovy fa maro ireo singa amin'ny HRM no mitantana ny biraon'ny birao hafa, izay ny zavatra mahatonga izany tahirin-kevitra tena ilaina izany, na eo aza ny fomban-drazana. Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia miombon-kevitra amin'ny ampahany fito izay ataon'ny SPM amin'ny fikambanana. Ireo dia aseho ao anatin'io segondra manaraka io.
Ilainao ny olona hanatanteraka asa sy asa feno ao amin'ny fikambanana. Eny tokoa, na dia amin'ireo milina maoderina indrindra aza, dia mbola ilaina ny olombelona. Eo andalam-panoharana, iray amin'ireo andraikitra manan-danja ao amin'ny HRM dia ny manatanteraka asa. Ny fandraisana anjara dia ahitana ny fizotry ny famolavolana rehetra amin'ny fanolorana fibodoam-panatanjaham-bokatra. Ao anatin'ny ambaratongam-pahefana, misy ny fandrosoana fototra efatra:
Fanatsarana ny drafitry ny mpiasa. Io fandaharana io dia ahafahan'ny HRM mahita ny isan'ireo olona tokony hampiasainy amin'ny fahazoana ny faniriana fidiram-bola.
Fanatsarana ny politikan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina samihafa amin'ny asa. Ny kolontsaina marolafy ao amin'ny toeram-piasana dia mametraka fitokisana mihamitombo hatrany, satria maro ny olona avy amin'ny fananganana fototra amin'ny mpiasa.
Mikarakara ny fiantsoana miaramila. Tafiditra ao anatin'izany ny fitadiavana olona hameno ny toerana misokatra.
Tapa-kevitra. Amin'ity dingana ity, ny olona dia hihaona sy hisafidy, ary hisy ny volan'ny fiantohana sahaza. Ity fivoarana ity dia nodiovina tamin'ny alàlan'ny fanomanana, ny fikojakojana ary ny fitaomam-panahy.
Ny fikambanana tsirairay dia manana fepetra hiantohana ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fiaraha-miasa ao anatin'ny fikambanana. Ny iray amin'ireo asa ataon'ny HRM dia ny hanangana ny fampahalalam-baovao tafiditra amin'izany politika izany. Amin'ny fampandrosoana ny politika, ny HRM, ny fitantanana ary ny tompon'andraikitra dia mifandray amin'izany. Ohatra, ny manam-pahaizana HRM dia mety hahatsikaritra ny fepetra takiana amin'ny tetikady na ny tsy fitoviana eo amin'ny fandaminana, mitadiava fihetseham-po amin'ny fomba fiasa, mametraha ny tetika, ary aorian'io dia mampita izany fomba izany amin'ny mpiasa. Tena ilaina ny manamarika eto fa ny fizarana ny HR dia tsy afaka miasa irery. Ny zava-drehetra dia ilainy ny mampiditra ny fizarana tsirairay ao amin'ny fikambanana. Ireto misy tranga vitsivitsy momba ny politika momba ny toeram-piasana:
Mianara manara-maso ny fampianarana
Ireo manam-pahaizana HRM dia mila manamafy fa ny fandoavam-bola dia azo ekena, mahafeno ny sehatry ny indostria, ary avo avo lenta mba hampiantrano ny olona hiasa ho an'ny fikambanana. Ny famerenana amin'ny laoniny dia mampiditra ny zavatra rehetra azon'ilay mpiasa ho an'ny asany. Ankoatra izany, mila manamafy ny manam-pahaizana HRM fa ny fanonerana dia mitovy amin'ny karazan'olona hafa izay manao asa azo ampiharina. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana rafitra fandoavam-bola izay mandinika ny taona maro miaraka amin'ny fikambanana, ny traikefa an-jatony, ny fampianarana, ary ny fomba fijery mifanohitra amin'izany. Ny fepetra momba ny karama raisin'ny mpiasa dia mampiditra ireto manaraka ireto:
Ny tombontsoa ara-medaly
401 (k) (fisotroan-dronono)
Fandaniam-bola amin'ny fampianarana
Koa satria tsy feno tanteraka izany, dia hodinihana ny fanampiana ao amin'ny Toko 6 "Remuneration and Benefits".
Ny fikojakojana dia ahitana ny fihazonana sy ny mpiloka hirika hiaraka amin'ny fikambanana. Ny fandoavam-bola dia fiheverana lehibe amin'ny fikolokoloana solontenam-panjakana, saingy misy ihany koa ny antony hafa. Ny 90% amin'ny mpiasa dia mandao fikambanana iray noho ireto antony manaraka ireto:
Ireo olana manodidina ny asa ataony
Hery amin'ny filoha
Malemy noho ny kolotsaina ifarimbonana
Toe-javatra ratsy eo amin'ny toeram-piasana
Na inona na inona, ny 90 isan-jaton'ny mpitantana no mihevitra ny fialan'ny solontena noho ny karama (Rivenbark, 2010). Avy eo, matetika ireo mpitarika matetika dia manandrana manova ny volany amin'ny fiarovana ny olona tsy hivoaka, raha ny vola dia tsy ny antony handaozany na inona na inona. Fizarana 7 "Fikojakojana sy famporisihana" sy ny fizarana 11 "Fepetra fampiasana mpiasa" dia mandinika teknikam-pahaizana vitsivitsy mba hitazonana ireo solontenam-panjakana tsara indrindra ao anatin'ireo singa efatra ireo.
Rehefa mampiasa ny angovo isika mba hikarakarana solontena vaovao, dia mila miantoka azy ireo isika fa vonona ny hanatontosa ilay hetsika ary handroso amin'ny famolavolana sy fitomboan'ny fahaiza-manao vaovao amin'ny asany. Izany vokatra izany amin'ny fahombiazan'ny tetik'asa. Ny fiomanana koa dia ampahany manan-danja amin'ny fitaomam-panahin'ny mpiasa. Ireo solontenam-pahatsiarovan-tena izay manatsara ny fahaiza-manao ananany dia manana fironana hifaly kokoa amin'ny asany, izay mitarika ny fikojakojana ny mpiasa. Ireo fepetra fanomanana tetikasa dia mety hampiditra ireto manaraka ireto:
Ny asa vitan'ny asa manomana, ohatra, ny fomba fandaminana programa PC manokana
Miomana amin'ny taratasy
Fomba fananganana vondrona
Fikarakarana sy fanomanana ara-dalàna, ohatra, ny fitondran-tena tsy mendrika sy ny fitondran-tena
Ny olon-tsotra tsirairay dia tsy maintsy mahafantatra momba ny lalàna rehetra izay misy fiantraikany eo amin'ny toeram-piasana. Ny manam-pahaizana HRM dia mety hiasa amin'ny sasany amin'ireto lalàna ireto:
Fepetra momba ny fitsaboana amin'ny fitsaboana
Mandoa fepetra, ohatra, ny ambany indrindra ambany indrindra azon'ny lalàna
Lalàna fiarovana ny mpiasa
Ny fepetra ara-dalàna ataon'ny HRM dia miova mandrakariva, noho izany ny HRM dia tokony hahafantatra tsara ny fiovana mitranga ary aorian'izany dia mampita izany fivoarana izany amin'ny fikambanana mpiandraikitra rehetra. Mifanohitra amin'ny fampidirana ny ampahany mifototra amin'ny lalàna HRM, dia hiantso ireo lalàna ireo isika amin'ny fizarana tsirairay.
Ankoatr'ireny ampahany tena izy ireny, ny fahaiza-manaon'ny fifandraisana ary ny fahaiza-mitantana ny fitantanana dia manan-danja amin'ny fitantanana ny fitantanana olona mahomby ary ankoatra ny fitantanana ankapobeny.
Na dia eo aza ny fanaraha-maso ny zava-misy ao anatiny, ny talen'ny HR dia mila mandinika ny fahefana ivelan'ny lalao izay mety hisy fiantraikany amin'ny fikambanana. Ny hery ivelany, na ny fari-piaviana ivelany dia ireo zavatra ireo izay tsy manana fifandraisana mivantana avy hatrany; Na ahoana na ahoana, dia mety ho zavatra izay mety ho vokatr'izany eo amin'ny olona izany. Ny vondrona ivelany dia mety hampiditra azy io:
Globalization sy fialan-tsasatra
Fiovana amin'ny lalàna ara-barotra
Ny fahasamihafana eo amin'ny mpiasa
Manova ny fiheverana ara-tsosialy ny mpiasa
Ny mpiasa faran'izay be mpampianarina indrindra
Fanimbana sy fanalefahana indray
Innovation nampiasaina, ohatra, tahiry HR
Fampiasana ny fampitam-baovao tsy tapaka amin'ny fampielezana ny vaovao amin'ny mpiasa
Fikarakarana trano any Gurgaon